प्रियंका र आयुष्मानको ट्याटु नाटक – An Online Entertainment News Portal
HomeGossipप्रियंका र आयुष्मानको ट्याटु नाटक
October 4, 2018 sutraentertainment Gossip, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट – अभिनेता आयुष्मान देशराज र अभिनेत्री प्रियंका कार्कीबाट अब सिनेमा लाइन र दर्शकले अपेक्षा गर्ने के ? प्रेमको यात्रा त जीवनभर नै चल्छ । तर, दर्शकले उनीहरुको प्रेमको रुप हेरिसकेका छन् । इन्गेजमेन्ट पनि गरिसकेका छन् । तर, आयुष्मान र प्रियंकालाई प्रेम व्यक्त गर्ने तिर्खा भने अझै मरेको छैन ।
यी दुइले आफूहरुको नाम गाँसेर आयांक बनाएका थिए । आयांकको नाममा अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले गर्धनमा ट्याटु खोपिसकेकी छिन् । उनले आफ्नो पोज सहितको तस्बिर सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेको धेरै भैसक्यो । अब पालो आयुष्मानको । प्रियंकाको भन्दा कम माया कहाँ गर्छन् र उनी ?
उनले पनि प्रियंका र आफ्नो नाममा जन्मिएको आयांकको नामको ट्याटु खोपेका छन् । यो ट्याटु शो गर्दा आयुष्मान हाँसेका छन् भने प्रियंका लजाएकी छिन् । तर, पनि उनीहरुले ट्याटु शो भने गरेका छन् ।
कहिले ट्याटु, कहिले चुम्बन, कहिले अंगालिएको तस्बिर । अब आयुष्मान र प्रियंका जस्ता कलाकार यस्तै कुरामा मात्र अल्झिने हो कि, प्रेमलाई अझै नयाँ चिराबाट अगाडि बढाउने ?
priyanka & aayushman tatoo
priyanka and aayushman contorversy